Warbixin saldhigyada Dagaalka Maraykanka iyo iiraan – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Warbixin saldhigyada Dagaalka Maraykanka iyo iiraan
Warbixin saldhigyada Dagaalka Maraykanka iyo iiraan
Maraykanku waxa uu saldhig ciidan ku leeyahay oo ciidamdiisu joogan dalkasta oo Iiraan xuduud dhuleed iyo mid badeedba la leh, marka laga reebo Azarbeijan iyo Armenia iyo mandaqadda badda madow. Labadaas dal ayaa ka badbaaday xayndaabka xulufadiisa, sababtoo ah iyagu Ruush bay u janjeeraan.
Dalalka sawirka ka muuqda waxa kamida Turkiga oo loo arko dalka ciidan ahaan ugu xoogan wadamada Muslimiinta ah iyo Dalka Baakistaan oo ah dalka qura ee Nukliyeer ku hubaysan ee Islaam ah. Turkigu waa Nato halka Pakistan ay xero Maraykan tahay, oo uuna u arko hoyga argagixisada lagasoo abaabulo. Ciidamo badanna ka joogaan.
Sidoo kale dhanka galbeedka Iiraan waxa ka muuqda saldhigyada ugu badan ee Maraykanku mandaqaddaas ku leeyahay. Wadmadii Carbeed oo dhan bay ciidmadiisu joogaan. Baxrayn oo gabigeeduba inyar ah ayuu saldhigga ugu weyn ku leeyahay. Kuwayt oo u muuqata Iiraaan ayuu ku leeyahay. Illaa afka gacanka Faaris.
Maraykanku Iiraan oo dhan ayuu dhankasta ka joogaa, inuu weeraro oo waxyeello badan gaarsiiyo waa mid sahlan agtiisa. Waayo waa awood dunidan ka jirta tan ugu xoogan uguna xeelad badan. Waxa uun u arkaa awoodda qura ee kula loollamaysa gobolkaas. Laakiin sababta u weyn ee uusan u weerari karin waa iyaga oo ah kuwo in la weeraraa ay dhaqaale badan iyo hub badan u baahan tahay. Kana xoogan dalalkii uu horay u naafeeyay. Sidoo kale inay xulufadiisa dhulka la simaan oo waxyeelleeyan ayaa ah caqabadda ku gudban Maraykanka.
Iiraan waa dal xaddaarad isir ku dhisan lahayd muddo kumanaan sano ah, markasta waxa ay ka shidaal qaataan isirkooda Faarisiga ah iyo sidii ay u maamuli jireen mandaqaddaas. Waa kuwo doonaya in guud ahan bariga dhexe inay awooddooda ku fidiyaan.
Waxa asal u ah ilbaxnimadoodii iyo samaysashada hub ay ku difaaci karaan ciiddooda iyo xulufadooda. Waa kuwo aqoonta ka hormariyay wax kasta. Fikradda Faarista weyn ayaa asal ah, waxa xiga in mad-habkoodu dookha labaad yahay. Haddii dagaal dhaco waxa ay waxyeello gaarsiin karaan dhammaan dalalka ay u arkaan in Maraykanku joogo kana aragtida duwan.
Iiraan waxay maamushaa oo ay intabadan xukuntaa marinka Xurmus oo saliidda (shidaalka) ugu badani marto caalamka. Dagaal ka qarxa gobolkaas ayaa sababi kara in daaraha dhaadheer ee Khaliijka ka taagani ay dhulka ka hoos maraan. Iyo in Shidaalka caalamku noqdo wax gabaabsi ah!
Gobolkaas bariga dhexe waa goob istiraatiiji ah oo in milaayiin ruux ku dhintaan ay fududahay. Waxaa taagan maraakiibta dagaalka ee Maraykanka iyo xulufadiisa, kuwii Ruushka, kuwa Shiinaha, kuwa Iiraan iyo dalkasta oo awooddiisa tijaabinaya. Waa goob dhaqaalaha ugu badani galo kana soo baxo.